10 Tsy misy fomba Bullsh * t hahatsapa ho tiana bebe kokoa ary tadiavina amin'ny fifandraisanareo - Fifandraisana
10 Tsy misy fomba Bullsh * t hahatsapa ho tiana bebe kokoa ary tadiavina amin'ny fifandraisanareo
Isika tsirairay avy dia maneho fitiavana amin'ny fomba hafa.
Manana ny maha-izy olona sy lafin-javatra maro anay izahay, ary izany, miaraka amin'ny zavatra niainantsika taloha, dia mamolavola ny fomba anehoantsika fitiavana rehefa mifankatia.
Mety ho tsara vintana ianao ary hiafara amin'ny fifandraisana amin'ny olona iray izay maneho ny fitiavany amin'ny fomba mitovy aminao ihany.
ve ny iiconics mpivady
Saingy ny lalàna momba ny mety, ny fisian'ny mifanohitra matetika no manintona, ary ny isan'ny fomba hanehoana ny fitiavanao dia midika fa mety ho tonga am-pitiavana olona iray ianao izay manana hevitra tsy mitovy amin'ny dikan'ny fanehoana ireo fahatsapana ireo. amin'ny mpiara-miasa.
Tsy midika izany fa tsy dia manan-kery intsony ny fifandraisana, ary azo antoka fa tsy midika izany hoe voaozona tsy hahomby.
Saingy midika izany fa samy tsy maintsy mampifanaraka ianareo mba hahazoana antoka fa mahatsapa ho voaro ianareo amin'ny fitiavana ny tsirairay.
Ny fomba fanao mahazatra antsika amin'ny maha-olombelona dia ny mihevitra fa ny olona dia mahita zavatra amin'ny fomba fijery mitovy amintsika.
Hianarantsika ny fomba sarotra izay tena lavitra ny zava-misy.
Saingy mety ho sarotra tokoa ny hanaiky an'izany rehefa miditra amin'ny fampitoviana ny fitiavana.
Mety ho henjana ny hanaiky fa ny mpiara-miasa amintsika dia tsy mampiseho fitiavana ny fomba mety antenaintsika amin'izy ireo sy ny mahatakatra ny fizotran'ny eritreritra ao ambadiky ny zavatra ataon'izy ireo.
Raha sendra olana toy izao ianao ary tsy mahatsapa ho mahazo ny fitiavana sy ny fiheverana mendrika ny sakaizanao, dia mila maka fomba roa sosona ianao amin'ny zavatra.
Etsy ankilany, ny fahatongavana any amin'ny toerana ahatsapanao fa tiana kokoa amin'ny fiarahana ianao dia hampahafantatra ny vadinao ireo zavatra ilainao hahatsapa fa tadiavina (ary vonona izy ireo hanao ireo fanovana ireo ho anao).
Amin'ny lafiny iray, mila izany ianao raiso ho iza izy ireo , ary ekeo ny fomba fanehoany ny fihetseham-pony.
Andao atomboka amin'ny lafiny manan-danja indrindra, dia ny fanitsiana ny antenainao, tsy ampidininao ny fenitra arahinao, ary avy eo mandroso mijery ireo fomba azonao anampiana azy ireo hanome anao izay irinao.
Resaka marimaritra iraisana daholo izany, fa raha tena mifankatia dia tokony samy ho vonona hanao ny ezaka.
Fomba 6 hahatsapana fa tiana kokoa ianao amin'ny fanovana ny fomba fijerinao
Andao hodinihintsika ny fomba vitsivitsy ahafahanao mitantana ny zavatra antenainao ary mijery zavatra amin'ny fomba hafa, mba hanampiana anao hankasitraka ny zavatra rehetra ataon'ny olon-tianao no ataovy mba hampisehoana aminao fa tia anao izy ireo.
1. Ekeo fa ny fomba fanehoanao fitiavana dia tsy hitovy amin'ny azy ireo.
Ny dingana voalohany dia ny fanekena hatrany.
Tokony hanaiky ny zava-misy ianao roa fa tsy hanana hevitra mitovy mihitsy amin'ny fomba hanehoana ny fifankatiavana ary ajanony ny fiezahana hiady aminy.
Arakaraka ny hataonao haingana, dia ho sambatra ianao!
2. Eritrereto tsara ny zavatra rehetra ataon'izy ireo ho anao.
Mety ho be am-bava ianao raha maneho fitiavana, fa ny fitiavana ara-batana kokoa angamba no tian'izy ireo.
Miezaha mametraka ny tenanao ao amin'ny kirarony mandritra ny iray minitra ary diniho ny zavatra rehetra ataon'izy ireo ho anao sy ny fomba manodidina anao.
Ahoana no ataon'izy ireo maneho ny fitiavany ho anao?
Inona no ataon'izy ireo ho anao nefa tsy mila manontany akory ianao?
Inona ireo zavatra kely araka ny eritreritrao ny fomba fampahafantaran'izy ireo anao fa tia anao izy ireo, tsy mitovy amin'ny fomba mety anehoanao azy?
3. Mifantoha amin'ireo zavatra ireo isaky ny mahatsiaro ho tsy tiana ianao.
Avy eo, isaky ny mahatsapa ianao fa tsy tiana na tsy tiana ianao satria tsy manao ireo zavatra izay, isaina ho fampisehoana fitiavana, ao amin'ny bokinao, avereno miverina any an-tsainao ireo zavatra madinidinika rehetra ataony ho anao, sy ny fombany manokana. amin'ny fampisehoana aminao ny maha-zava-dehibe azy ireo amin'izy ireo.
Aza avela hifantoka loatra amin'ny foto-kevitrao momba ny dikan'ny hoe maneho fitiavana ny tenanao. Avadiho amin'ny azy ireo ny fifantohanao.
4. Asehoy fitiavana ny tenanao.
Rehefa eo amin'ny fifandraisana am-pitiavana isika dia matetika no manery azy mafy.
Tampoka eo, ny fahasambarantsika sy ny fahatokisantsika tena dia miankina tanteraka amin'ny hoe misy olona iray tia antsika na tsia.
Ary tsy salama izany.
Mazava ho azy fa tokony ho ampahany lehibe amin'ny fiainanao izy ireo. Saingy tsy tokony ho izy irery ihany no afovoany.
Ary mila manana zavatra hafa mandeha ianao izay mahatsiaro ho ilaina sy feno.
Mandania fotoana bebe kokoa amin'ireo olona hafa izay tia anao sy maniry anao, toy ny fianakavianao sy ireo namanao akaiky indrindra.
Ary mifantoha amin'ny fitiavanao bebe kokoa ny tenanao.
Manalavira ny tenanao tsy hiteny ratsy ary manomboka mitsabo tena amin'ny fanajana sy fanajana toy ny ataonao amin'ny vadinao.
Amin'izay ianao vao afaka manatsara ny fahamendrehanao ary manomboka mahatoky amin'ny fitiavan'ny namanao anao fa tsy mila fanamarinana tsy tapaka.
5. Ekeo fa ho dingana miadana ny fanitsiana ny zavatra antenainao.
Mila mazava ianao fa tsy misy izany hitranga mandritra ny alina.
Hiezaka ny tsara indrindra vitanao ianao, saingy indraindray ianao sahirana mahita zavatra amin'ny fomba fijerin'izy ireo.
Ny faharetana no fanalahidy raha ny fitiavana no resahina, fa raha tena tapa-kevitra ny hampandeha tsara ny raharaha ianao dia ho tonga eo, tsikelikely.
6. Amboary ny zavatra antenainao, aza ahena izy ireo.
Zava-dehibe ny manoritra izany fanitsiana ny zavatra antenainao izany raha ny amin'ny fomba hanehoan'ny olon-tianao ny fitiavany anao Raha ny marina midika hoe fanitsiana, ary tsy mampidina .
Na dia mampiseho ny fitiavany amin'ny fomba hafa tanteraka aminao aza ny olon-tianao dia tokony mbola asehon'izy ireo ihany izany.
Mendrika ny tena fitiavana ianao.
Ary mendrika ny hajaina ianao ary hahatsapa ho sarobidy.
Raha mahatsapa tsy fitiavana sy tsy ilaina tanteraka ianao, na eo aza ny fiezahana hahita zavatra amin'ny fomba fijerin'izy ireo, dia mety ho fotoana izao handinihana indray ny fifandraisana.
Mitodiha any amin'ny namana tsara izay atokisanao ka anontanio azy ireo ny heviny marina na hiresaka amin'ny mpitsabo anao momba ny fifandraisana.
Ny fanamarihana ny fahatsapanao momba ny vadinao sy ny zavatra ataon'izy ireo na tsy ataony mba hahatonga anao hahatsapa fa tiana dia tena afaka manampy anao hanana mazava amin'ny zavatra.
Fomba 4 hanampiana ny mpiara-miasa aminao hahatsapa fa tadiavina bebe kokoa
Mandritra ny fotoana fiasana amin'ny fahitanao ny atao hoe fitiavana sy ny fiezahana hahita izany amin'ny mason'ny sakaizanao dia zava-dehibe ny mangataka amin'izy ireo, am-panajana sy amin-kitsim-po, mba hanao ny anjarany marina amin'ny asa.
ny fomba hamoahana ny vadiko hiala amin'ny tompovaviny
Tsy hanova velively ny lafin-toetra fototry ny toetran'izy ireo ianao, ary tsy tokony ho tianao koa, fa mety afaka manampy azy ireo hahita sy hahatakatra ny zavatra ilainao ianao.
Tsy fantatrao mihitsy, mety hitranga fa izy ireo koa indraindray dia mahatsapa ho tsy tiana sy tsy ilaina noho ny fihetsikao manoloana azy ireo. Ho gaga ianao.
Raha tena te-hiasa ny roa tonta dia samy ho vonona ny hametraka ny ezaka ary hifandefitra kely.
1. Manaova resaka marina sy milamina.
Mila mipetrapetraka miaraka amin'izy ireo amin'ny fotoana mety ianao, rehefa samy tsy sorena na variana ianao, ary ampahafantaro azy ireo izay nanelingelina anao.
Ampahafantaro azy ireo, amin'ny teny malefaka ary tsy manipy izany eo amin'ny tarehin'izy ireo, fa efa nahatsapa ho tsy ilaina ianao, ary mila fanomezan-toky fa tena manan-danja amin'izy ireo ianao.
2. Ampahafantaro azy ireo izay efa vitany tsara.
Raha mifantoka tanteraka amin'ny zavatra ratsy ianao ary milaza fa tsy misy zavatra ataon'izy ireo izay mahatonga anao hahatsapa ho tiana, dia tsy hampahatsapa azy ireo ho tsara izany.
Alao an-tsaina ange raha tonga aminao izy ireo ary nilaza taminao fa ataonao tsapany ho tsy ilaina foana izy ireo.
Inona no ho tsapanao?
Mety hahatsiaro tena ho meloka ianao, ary angamba somary tezitra aza, ary tsy vonona hiasa amina zavatra.
Noho izany, alohan'ny resaka ataonao dia mieritrereta momba ireo zavatra madinidinika rehetra izay mety.
Ampahafantaro azy ireo ireto zavatra ireto, mba tsy hahatonga azy ireo hahatsapa ho toy ny olona mahatsiravina, ary fantatr'izy ireo fa manana fototra iorenany izy ireo.
3. Azavao ireo zavatra mety hahatonga anao hahatsapa ho tiana indrindra.
Misy zavatra sasany izay tianao be dia be hataon'izy ireo hampahafantatra anao ny fitiavany anao?
Misy zavatra tena zava-dehibe ataon'izy ireo ho anao hampahatsapanao fa tadiavina ianao?
Tianao ve tsy nampoizina ? Ho sarobidy aminao ve ny fanomezana kely indrindra sy mora indrindra izay mampahafantatra anao fa mieritreritra anao izy ireo?
Mila fifandraisana ara-batana be ve ianao?
Mety misy zavatra sasantsasany izay tsy hahatsapan'izy ireo fahafaham-po fotsiny, ary misy zavatra sasany izay tsy hanovanao mihitsy ny momba azy ireo, fa misy kosa ny zavatra mety ho azon'izy ireo manomboka manomboka manao zavatra hafa.
Ohatra, raha tsy olona tia miteny hoe 'tiako ianao' isan'andro, dia tsy azo ovaina izany atsy ho atsy.
Mila avy amin'izy ireo izany.
Tsarovy, satria tsy milaza izany foana izy ireo dia tsy midika hoe tsy mahatsapa izany.
Araka ny voalaza etsy ambony, ity fizotran-javatra ity dia miresaka faharetana avokoa.
Tsy azonao antenaina ny manova ny fomba manodidina azy ireo ao anatin'ny indray mipy maso ny olon-tianao.
Raha manao izany ianao dia ho diso fanantenana ihany.
Mila manana faharetana ianao, ary ekeo ny zava-misy fa, na dia miezaka mafy araka izay azony atao aza izy ireo hametraka ny sasany amin'ireo zavatra nolazainao ireo dia mety tsy ho tonga ho azy ireo izany.
Ka hanadino izy ireo ary ho diso hevitra. Betsaka.
Ary, na dia mety mandroso amin'ny faritra sasany aza izy ireo, dia saika tsy hanomboka hitondra tena mihitsy amin'ny fomba tianao izy ireo.
Ambonin'izany, miova ho azy ny olona rehefa mandeha ny fotoana ary mivoatra ny fifandraisana, ary tsy fantatrao velively ny fiantraikan'izany amin'ny fomba anehoany ny fitiavany anao.
Miaraka amin'ny ezaka ataonao mba hampifanarahana ny zavatra antenainao fa tsy hifantohany amin'ny vadinao manontolo ny fifalianao, ary ny ezaka ataon'izy ireo haneho aminao ny fahatsapany momba anao, ary ny fatra faharetana, ny fifandraisanareo dia afaka hiroborobo, miaraka amin'ireo mahatsapa ianao fa tiana, tadiavina ary vonona ny hitondra miaraka amin'izao tontolo izao.
Mbola tsy azonao antoka izay hatao amin'ny mpiara-miasa izay tsy mampahatsiaro anao ho tadiavina? Miresaka an-tserasera amin'ny manam-pahaizana momba ny fifandraisana avy amin'ny Relationship Hero izay afaka manampy anao hahalala zavatra. Tsotra.
inona no hatao amin'ny sipako amin'ny fitsingerenan'ny andro nahaterahany
Ahoana ny fomba hahitana fihetseham-po amin'ny fifandraisana amin'ny dingana 5 fotsiny!
Ahoana no fomba hanajan'ny lehilahy anao: tsy misy toro-hevitra tsy misy dikany 11!
john cena vs aj style summerslam
george lopez net mendrika 2020
ahoana no hahalalana hoe tapitra ny fiarahanareo
famantarana izay ampiasaina amin'ny fifandraisana
famantarana ny mampiaraka amin'ny Internet tsy liana izy